मुख्य समाचार – Page2– Tesro Ankha
हलेसीमा चढाइएको ढ्याके भेटी ८७१ किलो
हलेसी (खोटाङ) । विभिन्न समयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउँदा दर्शनार्थीले चढाएका सिक्का (ढ्याके) भेटी तौलँदा ८ सय ७१ किलो ७ सय ग्राम भएको छ । दर्शनार्थीले हलेसीमा चढाएका यो सिक्का गत माघ ११ गतेसम्मको हो । तौलिएको सिक्कामध्ये १ र २ रुपैयाँको ३ सय ४६ केजी २ सय ग्राम रहेको सूचना केन्द्र हलेसीका निमित्त प्रमुख सयन्द्र राईले जानकारी गराए । निमित्त प्रमुख राईका अनुसार, १ रुपैयाँको सिक्का ३ सय २८ केजी ...
निर्माणसम्पन्न नभई सडक उद्घाटन
मनोज गिरी दुर्छिम (खोटाङ) । स्थानीय सरकारका माननीय भन्दैमा जे पायो त्यही काम गर्न पाइन्छ कि नाइँ ? पाइँदैन भने निर्माणसम्पन्न नभई सडक उद्घाटन गर्न पाइन्छ ? पाइँदैन भने त्यस्ता माननीयलाई स्थानीय सरकारले कस्तो कारबाही गर्लान् ? पर्खिनैपर्ने भएको छ । प्रसंग– बोझे–दाम्दले–हैदे–सुनकोसी ग्रामीण सडक उद्घाटनको हो । प्रदेश सांसद राजन राई र पूर्वसभासद् पाँचकर्ण (पीके) राईले सो सडक उद्घाटन गरेका थिए । ...
रोग निको नभए छारिमाला जाऊँ
एमिला राई धितुङ (खोटाङ) । ‘म आमाको गर्भबाटै भगवान्देखि रुचाइएकी थिएँ,’ माता तारादेवी राईले सुनाइन्, ‘तर, ईश्वरलाई चिन्न नसक्दा र नबुझ्दा साह्रै दुःख पाएँ ।’ ‘धरानबाट हलेसी आउनुभएको दुर्गा मातालाई भेटेपछि प्रक्रियागत ढंगले भगवान्को पूजा गर्ने विधि थाहा पाएँ,’ माता राईले खुसी व्यक्त गरिन्, ‘उहाँकै सल्लाहमा विधि पुर्याई पूजा गर्नेक्रममा सात वर्षसम्म मन्दिरमा साउन र माघ महिनामा पूजा गरें । गुफ...
काम गरेको पारिश्रमिक माग्दा कानको जालो फुट्नेगरी कुटपिट
हलेसी (खोटाङ) । काम गरेको पारिश्रमिक माग्दा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ ऐंसेलुखर्कनिवासी सचिन राई कुटिएका छन् । ऐंसेलुखर्ककै पेसल राईले सचिन राईलाई निर्घात कुटपिट गरेका हुन् । तुवाचुङ जायजुम संरक्षण समिति भवनको पुरानो प्लास्टर भत्काउने (चिपिङ) गरेको कामको पारिश्रमिक पटक–पटक माग्दा अन्ततः कानको जालो फुट्ने राई कुटिनुपरेको थियो । सचिन राई कुटिनुका कारण सोध्न पेसल राईको मोबाइल नम्बर ९८६१६१४०८७ ...
होलीमा उच्छृङ्खल देखिए पक्राउ
काठमाडौं । रङको चाड होलीलाई संस्कृतिअनुसार आपसी शुभकामना साटासाट गरेर शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि नेपाल प्रहरीले विशेष प्रचारात्मक अभियान चलाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विगत चार दिनदेखि हरेक प्रहरी इकाइमार्फत समुदायसँग मिलेर प्रचार–प्रसार अभियान चलाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रहरी र समुदायले सं...
रुपाली होलीमा ८२ वर्षीय पूर्वसांसद
शेरबहादुर सिंह भीमदत्तनगर । पूर्वसांसद गंगादत्त जोशी कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१८ मा होली चाडको खेलमा पाइला मिलाइरहेको अवस्था भेटिए । ८२ वर्षीय जोशीमात्रै नभई, उनीसित डडेल्धुराको रुपालबाट भीमदत्तनगरमा बसाइँ सरेका धेरै वृद्ध फागूपूर्णिमाका अवसरमा आयोजित परम्परागत रुपाली होलीमा रमाए । वसन्त ऋतु र नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा रंगीन चाड होलीमा देशभरि रमाइलो भइरहेका बेला यहाँ विगत ५० वर्षदेखि र...
७ लाखको त्रिशूल
टिवन राई हलेसी (खोटाङ) । खोटाङको हलेसीमा रहेको हलेसी गुफा प्रवेशद्वारनजिकै १ सय ३७ किलो तामाको त्रिशूल ठड्याइएको छ । शिवरात्रिको अवसर पारेर त्रिधार्मिकस्थल हलेसीमा सो त्रिशूल राखिएको हो । एपेक्स कन्सट्रसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौंले शिवरात्रि मेलाको अवसर पारेर गत फागुन १९ गते त्रिशूल राखेको हो । हलेसी गुफा प्रवेश द्वारनजिकै ठड्याइएको त्रिशूल २५ फिट अग्लो रहेको छ । सो त्रिशूल ब...
यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ–३)
थेसिस लेख्ने तरिका थाहा नहुँदा कतिपय विद्यार्थी अन्योलमा छन् । नियमित कक्षा नलिएकाले लेख्न तरिका थाहा नहुँदा उनीहरूले वर्षौंसम्म थेसिस पूरा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको समस्या बुझेर शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले थेसिस लेख्ने तरिका यसरी सुझाएका छन् । रिसर्च क्वैसन गएको छलफलमा हामीले टपिक कसरी लेख्ने भन्नेबारे केही कुरा गर्यौं। वास्तवमा टपिक भनेकै तपाईंको रिसर्च प्रब्लम हो । क्वालिटी रिसर्च...
यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ–२)
थेसिस लेख्ने तरिका थाहा नहुँदा कतिपय विद्यार्थी अन्योलमा छन् । नियमित कक्षा नलिएकाले लेख्न तरिका थाहा नहुँदा उनीहरूले वर्षौंसम्म थेसिस पूरा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको समस्या बुझेर शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले थेसिस लेख्ने तरिका यसरी सुझाएका छन् । पाठ–२ हाउ टु राइट अ टपिक अफ रिसर्च ? आज फेरि टपिककै बारेमा कुरा गरौं । यसअघि हामीले टपिक छान्नेबारे केही भनेका थियौं । सकभर आफ्नो रुचि र ल...
प्रकाश अधिकारी सुर्खेत बुलबुल ताल मै सानी हुनाले छुट्यो मायाजाल प्रस्तुत लोकगीतले बुलबुले ताललाई मात्र नभई, सिंगो सुर्खेत जिल्लालाई नै चिनाउन सफल भएको छ । लोक संकलक पे्रमदेव गिरीको शब्द र कमला श्रेष्ठको स्वरमा ३० को दशकमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको यो गीतले बुलबुले तालसँगै सुर्खेत जिल्लालाई नै चर्चित बनायो । अहिलेजस्तो यातायात र घुम्ने संस्कार विकास नभइसकेको त्यो समयमा रेडियो नेपालबाटै सुर...